Nepal Auto टाटाका फरएभर रेन्ज : यस्ता छन् मूल्य र विशेषता - Nepal Auto
टाटाका फरएभर रेन्ज : यस्ता छन् मूल्य र विशेषता
२७ फागुन, २०७७
काठमाडौं – टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले हालै फरएभर रेन्ज अन्तर्गत ५ नयाँ गाडीहरु सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले नेपाली बजारमा उपलब्ध गराएको बीएस६ प्रविधियुक्त गाडीहरु – टियागो, टिगोर, नेक्सन, अल्ट्रोज र एच फाइभ हुन् ।
यो संगै टाटा कंम्पनी उक्त इन्जिन प्रविधि भएको पाँच मोडलहरु एकैपटक सार्वजनिक गर्ने नेपालकै पहिलो कंम्पनी भएको छ । टाटाको इम्प्याक्ट २.० डिजाइन ल्याङ्ग्वेज अनुसार तयार पारिएकाले यी गाडी निकै नै सुन्दर समेत भएको कम्पनीको भनाइ छ ।
बदलिदो समयको माग अनुसार पुनः डिजाइन गरिएको टियागो, टिगोर, नेक्सन, अल्ट्रोज र एच फाइभ कार्य क्षमता, आरामदायी र सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि अरु भन्दा अग्रस्थानमा रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।
१२ सय सीसी इन्जिन क्षमताको नयाँ टियागोको बनावट आकर्षक तथा स्पोर्टी रहेको छ । उन्नत खालको सस्पेन्सन प्रणाली र एन्ड्रोइड अटो जस्ता पछिल्ला इन्फोटेनमेन्ट सुविधाहरु भएको यो गाडी रातो, पहेलो, निलो लगायत ६ वटा रङहरुमा उपलब्ध छ । टाटा टियागो फोर स्टार सेफ्टी रेटिङ पनि प्राप्त गर्न सफल भएकोे छ ।
टियागो ह्याचब्याक विभिन्न ५ भेरिएन्टमा उपलब्ध छ र यसको मूल्य २८ लाख देखि ३७ लाख १५ हजार रुपैयाँ सम्म छ ।
२. नयाँ टिगोर
१२ सय सीसी इन्जिन क्षमताको नयाँ टिगोरमा डिजिटल इन्स्ट्रयुमेन्ट क्लस्टर र रिभर्स क्यामेरा जस्ता अत्याधुनिक सुविधाहरु रहेका छन् । मनमोहक बनावट सहित उत्कृष्ट सुरक्षाको बिशेषता भएको यो गाडी पाँचवटा रङहरुमा उपलब्ध छ । टाटा टिगोरले पनि फोर स्टार सेफ्टी रेटिङ प्राप्त गरेको छ ।
टिगोर सेडान विभिन्न ५ भेरिएन्टमा उपलब्ध छ र यसको मूल्य ३२ लाख ५० हजार देखि ३९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ सम्म छ ।
१२ सय सीसी इन्ज्नि क्षमता भएको नयाँ नेक्सनमा आईआरए जस्ता समुच्च प्रविधि जडान गरिएको छ । यस प्रविधिले गर्दा यो गाडी नेपालको सडक सुहाँउदो भएको कुरा कम्पनीले जनाएको छ । टाटा नेक्सन ग्लोवल सेफ्टी रेटिङमा फाइभ स्टार प्राप्त गर्न सफल गाडी पनि हो ।
इलेक्ट्रिक सनरुफ, इलेक्ट्रिक स्ट्याबिलिटी र कनेक्टेड कार टेक्नोलोजी लगायतका नयाँ बिशिष्ट विशेषताहरु भएको नेक्सन ६ वटा रङहरुमा उपलब्ध छ ।
टाटा नेक्सन एसयूभी विभिन्न ७ भेरिएन्टमा उपलब्ध भएको छ । यसको मूल्य ३९ लाख ९५ हजार देखि ५२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ सम्म छ ।
४. नयाँ अल्ट्रोज
१२ सय सीसी इन्जिन क्षमता भएको टाटाको नयाँ अल्ट्रोजको सम्पूर्ण बनावट अल्फा वास्तुकलामा आधारित छ । नेक्सनमा जस्तै आईआरए प्रविधि भएको यो गाडी आफ्नो श्रेणीमा सबैभन्दा सुरक्षित भएको कुरा ग्लोवल एनक्याप मार्फत प्रमाणित भैसकेको छ । साथै हृयाचब्याक सेग्मेन्टमा ग्लोवल सेफ्टी रेटिङमा फाइभ स्टार प्राप्त गरेको छ ।
यो रिदम, स्टाइल, लुक्स र अर्वन गरि चारवटा प्रकृतिमा उपलब्ध रहेको छ । प्रिमियम ह्याचब्याक अल्ट्रोज एउटा भेरिएन्टमा मात्र उपलब्ध छ र यसको मूल्य ३५ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ ।
५. नयाँ एच फाइभ
२ हजार सीसी इन्जिन क्षमता भएको एच फाइभको सम्पूर्ण बनावट बिशिष्ट ओमेगा आरसी वास्तुकलामा आधारित छ । शक्ति, सुविधा र कार्यकुशलताको दृष्टिकोणले यो गाडी अतुलनीय भएको कम्पनिले जनाएको छ ।
एच फाइभ बिभिन्न आकर्षक रङहरुमा उपलब्ध छ । टाटा एच५ विभिन्न ३ भेरिएन्टमा उपलब्ध छ र यसको मूल्य ८४ लाख ९९ हजार देखि ८९ लाख ९० हजार रुपैयाँ सम्म छ ।